Mudaaharaadyo looga soo horjeedo geerida nin reer Minneapolis ah oo gacanta booliska galay Isniintii | KWIT
Mudaaharaadyo looga soo horjeedo geerida nin reer Minneapolis ah oo gacanta booliska galay Isniintii
By Halima Osman • May 29, 2020
Mudaaharaadyo looga soo horjeedo geerida nin reer Minneapolis ah oo gacanta booliska galay Isniintii ayaa wali ka socda guud ahaan dalka. Saraakiisha booliiska ayaa sheegaya in loo sheegay mudaaharaadka saaka. Muuqaalkan fiidiyowga ah ee uu qabtay Siouxland Scanner oo lagu dhejiyay FB, qiyaastii konton mudaharaadayaal ah ayaa socod ku qaadanayey iyagoo sita calaamado dhahaya "Aanan Breathe" iyadoo lagu sharfayo George Floyd, isla markaana ku dhawaaqaya isla weedhahan.
Rakiilayaashu waxay u dhaqaaqeen saldhigga booliiska waxayna sii wadeen weydiisashada cadaaladda. Askariga booliiska ah ee hoos u dhigaya Floyd isagoo jilbaha qoorta u saaran ayaa la qabtay markii saddexaad eedeymo dil ah.
Taliyaha Bilayska Magaalada Sioux Rex Mueller iyo Woodbury County Sheriff Dave Drew ayaa sheegaya inay aad uga xun yihiin dhacdooyinka naxdinta leh ee ka dhacay magaalada Minneapolis.
Waxay soo saareen bayaan wadajir ah iyagoo sheegay inay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan qoyskii George Floyd, iyo sidoo kale dadka daggan Minneapolis ee la halgamaya wax ka qabashada shilkan kadib.
Mueller iyo Drew waxay yiraahdeen dhacdadani waxay ku kicisay caro iyo cabsi ku abuurtay ummaddeena iyo anaga oo ah Beesha Siouxland waa inaan ka faaiideysanaa fursadan wada-hadal wax dhisi kara oo dhiirigelin kara bogsiinta iyo hubinta.
Iowa maanta waxay leedahay 18, 502 COVID-19 xaaladood, 500 dhimasho. Gobolka Woodbury wuxuu leeyahay 10, 896 kiis iyo 44 dhimasho. Iyo Beuna Vista County waxay leedahay 3, 986 kiis, mana jiraan ilaa hadda wax dhimasho ah.
Magaalada Buena Vista, ku dhawaad afar meelood meel ka mid ah shaqaalaheeda ka hawlgasha xarunta wax lagu cuno hilibka doofaarka Storm Lake ayaa tijaabiyey cudurka loo yaqaan coronavirus ee sheeko. Tyson wuxuu sheegay inay si ku-meelgaadh ah u joojisay howlihii loo baahnaa.
Caafimaadka degmada Siouxland ayaa soo sheegaya in ay jiraan 15 xaaladood oo dhowaan la xaqiijiyey in ay ka jiraan Gobolka Woodbury.
Waan ka xunahay inaan soo sheegno hal dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacday Gobolka Woodbury nin weyn oo weyn (61-80)
Waaxdu waxay sheegtay maanta in Gobolka Woodbury uu arkayo hoos udhaca baahida loo qabo tijaabooyinka COVID-19.
Tan iyo markii iskuulada loo xiray cudurka faafa ee coronavirus ee ka dhacayay bartamaha magaalada dhexdeeda, in kabadan 250,000 oo cunno oo bilaash ah ayaa lasiiyay. Mas'uuliyiinta Degmooyinka Magaalada Sioux waxay hadda u wareegayaan cuntada xagaaga.
Qado xagaaga bilaash ah ayaa loo fidiyay dhowr sano carruurta da'doodu tahay 1-18 goobo kala duwan. Sannadka 2018, qayb cusub ayaa lagu daray, baska cuntada wareega, oo lagu qurxiyay midabyo dhalaalaya iyo "Cuntada Bilaashka ah" ee lagu xusay xagga sare.
Waxay degmadu ugu yeeraan Barnaamijka Cuntada Cunnada ee COVID-19 wuxuu sii wadi doonaa inuu si xasilooni leh ugu adeego maalmaha shaqada illaa iyo 3da Juun, markaasoo wejiga xagaaga ee barnaamijka bilaabmayo.
Caruurta jirta 1-18 waxay qaadan karaan quraac bilaash ah iyo jawaan qadada inta lagu gudajiray waqtiyada cuntada lagu cayimay 26 goobood. Cuntada waa in loo qaataa meel banaanka ah si loo isticmaalo, si loo gaaro jahawareer bulsho.
Iowa wuxuu ku soo booday tirada dadka u xareysnaa shaqo la'aanta usbuucii la soo dhaafay marka loo eego usbuucii ka horeeyey, sida lagu sheegay warbixin cusub oo uu soo saaray Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ee Mareykanka.
Boodhka ayaa imanaya iyada oo waddanku sii wadayo la tacaalidda dhibaatooyinka dhaqaale ee cudurka cudurka coronavirus. Warbixinta la sii daayay Khamiista ayaa muujisay 14,586 sheegashooyin cusub oo la soo gudbiyay intii u dhaxeysay May 17 iyo May 23. Taasi waxay kordhay usbuucii hore, markii 13,040 qof ay dacwad ka gudbiyeen Iowa. In ka badan $ 661 milyan oo kaalmooyin ah ayaa la bixiyay illaa iyo 4-tii Abriil, ayaa la siidaayay.